Muuqaallo laga helay Cali Xarbi oo ku eedeydsan dilka Sir David | KEYDMEDIA ONLINE
Muuqaallo laga helay Cali Xarbi oo ku eedeydsan dilka Sir David
Ilo ku dhow dhow baaritaanka ayaa rumeysan in Cali, ku fikiray inuu dilo xildhibaanno kale, ka hor inta uusan dooran Sir David, sida uu qoray The Telegraph.
UK - Cali Xarbi Cali oo ah 25 jir ka soo jeeda Soomaaliya, laguna tuhun sanyahay dilka Xildhibaan Sir David Amess, oo ka tirsanaa Baarlamaanka Ingriiska, ayay muuqaallada CCTV-gu muujinayaa isaga oo ka soo baxaya gurigiisa oo ku yaal aag ay deggan yihiin qoysaka lacagta leh oo dhaca Waqooyiga London.
Muuqaal gaaban iyo sawirro lagu baahiyay baraha bulshada, ayaa muujinaya, Cali oo gacanta ku sita boorso weyn, xilli uu ku sii jeeday Gospel Oak, 8.44am, xilliga London, Saddex saacadood ka dib wuxuu tagay Essex, halkaas oo Sir David lagu tooriyeeyay.
Muuqaalladaan, oo la fahamsan yahay inay qayb muhiim ah ka yihiin baaritaannada booliiska, ayaa muujinaya eedeysanaha oo si adag u haysta boorsadiisa, gacantana ku qarinaya jeebka jaakad weyn oo jilbaha gaareysa.
Socdaalka Cali ee Gospel Oak, kadib, waxaa la rumeysan yahay inuu u safray bariga London, halkaas oo uu u raacay tareenka Leigh-on-Sea, socdaalkiisa ku dhawaad ​​90-ka daqiiqo ayaa la macno ah inuu imaan karay aagga 10.30am - saacad iyo bar ka hor intaan Sir David lagu weerarin Methodist ee Leigh.
Booliiska ayaa kaamirada CCTV ka helay Sabtidii dukaan ku dhow guriga eedaysanaha, Ismet Cengiz, oo ah 50 jir, maamulaha Costcutter -ka, ayaa sheegay in uu shalay soo booqday dambi bare ka tirsan booliska.
Cali, wuxuu ballanta la kulnka xildhibaanka 69 jirka ahaa ee la khaarijiyay qabsaday toddobaad ka hor.
Cali oo ah Muslim British ah uuna dhalay la-taliyihii hore ee Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xarbi Cali Kullane, ayaa isku dayay in uu ballamo la yeesho xildhibaanno kale, sida ay ilo –wareedyo kale sheegayaan.
Booliska ka hortagga argagixisada ayaa sii wada su’aalaha Cali, oo lagu xiray goobta falku ka dhacay Jimcihii.